च्याट विथ छुदेन काविमो - Saturdayकलम | Kavyalaya - काव्यालय
च्याट विथ छुदेन काविमो | Saturdayकलम | Kavyalaya
by युवराज July 6, 2019
” बोस, के छ खबर ?”
– ” सब ठिक छ बोस, तिम्रो के छ ? ”
” म पनि बाँचेकै छु ।अनि बोस……”
पहिलो पल्ट साहित्य आँगनी कसरी टेक्नुभएको याद छ?
⇒ उतिखेर म बाग्राकोट हाइस्कूल पढ्थेँ । बाग्राकोटको बीडीआर बस्तीमा एउटा पुरानो घर छ । म अनि गजलकार लीलाबहादुर छेत्री त्यहीँ बस्थ्यौँ । हामीसँग अपुग र अभावबाहेक अरू केही थिएन । सिर्जना भनेको अभावहरूबीच नै धेर हुने रहेछ । हो, त्यही अभावबीच मैले गजल लेख्न सिकेको हुँ । शुरूमा लीला र म कम्पिटिशनको हिसाबमा गजल लेख्थ्यौँ । कोही बेला त हामी एकै दिनमा सात-सातवटासम्म गजल लेख्न भ्याउँथ्यो। कसैसंग आँखा जुधिदिइयोस्, प्रेमको गजल फुराइहाल्थ्यौँ । कसैले आँखा तरिदिइयोस्, दुःखको शेर लेखिहाल्थ्यौँ । कोठामा चामल सकियोस्, पीडाको गजलसँगै रून थाल्थ्यौँ ।
त्यो बेला मलाई लाग्थ्यो, गजल भनेको मनको कुरा लेख्ने सुन्दर माध्यम हो । आखिर त्यसरी गजल लेख्दा लेख्दै त म साहित्यमा छिरेको हुँ ।
तपाई लेखक नबन्नु भएको भए के बन्नु हुन्थ्यो ?
⇒ मान्छेलाई सब थोक बनाउने भनेको समय र परिस्थितिले हो । त्यसैले यसको जवाफ मैले अहिले जे दिए नि, त्यो सही हुँदैन।
लेख्न अघि म फुटबल खेल्थेँ । निकै राम्रो खेल्थेँ । स्कूलबाट खेलेको हरेक म्याचमा गोल गर्थेँ । फुटबल टिचर भन्नुहुन्थ्यो, ‘छुदेनले हानेको गोली जहिल्ये पोस्टमै पुग्छ ।’
लेख्न थालेपछि मैले फुटबल छोड़े । अहिले लाग्छ, फुटबल र लेखनको कलामा धेरैवटा समान्ता हुँदो रहेछ । लेखनमा डुब्लिङ गर्ने भनेको शैली घुमाएर हो । पाठकको मनमा लाग्ने लेख्नु भनेको पोस्टमा गोल छिराउनु जस्तै हो । त्यसैले कहिले कहीं सोच्छु, घरको अवस्था ठीकठाक हुँदो हो त म राम्रै फुटबलर पनि बन्न सक्थे !
किताब र कलमभन्दा पर बस्दा के गरेको भेटिनु हुन्छ ?
⇒ मसँग जहिले झोलामा एउटा किताब त हुन्छै हुन्छ । त्यो छैन भने, मलाई फोन सिक हुन्छु कि भन्ने डर लाग्छ । किनकि, म अलि बड़ी फोनमा झुतिने भएको छु रे अचेल । घरकाहरूले क्याङ क्याङ गर्दा थाहा पाएको क्या ! त्यैसेले म अचेल किताबसँगै धेर हुने कोशिश गर्छु । यदि किताबसाथमा छैन भने म गीत सुनिरहेको हुन्छु । होइन भने फिल्म हलतिर पुग्छु। नत्र पत्रकार साथीहरूसँग कालेबुङको डम्बरचोकमा गफ हाँकिरहेको हुन्छु ।
लेखक बन्न सजिलो कि पाठक ?
⇒ लेखकले पनि पहिले त राम्रो पाठक बन्नुपर्ने हो । अभ्यास शुरूमा पठनको निम्ति नै खर्चिनु पर्ने भएकोले राम्रो पाठक बन्न नै अलि धेर गाह्रो होला !
फातसुङपछि अब दार्जिलिङको अरू कथा लेख्ने योजना छ ?
⇒ मसँग दुइचारवटा विषय छन् । जसले निकै दिनदेखि दिमागमा फुटबल खेलिरहेको छ । अब केहीदिनमा नै म निस्कर्षमा पुगिहाल्नेछु । त्यसपछि काम शुरू गर्नेछु । तर, अब ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँले अर्को पुस्तकमा दार्जिलिङ, सिक्किम वा डुवर्स मध्येकै कुनै एउटा कथा पढ्न पाउनुहुनेछ ।
Image Credit: प्रवीण